बाँकेकाे ठोरिया जङ्गलमा भएकाे दुर्घटनाका मृतक तथा घाइतेहरूकाे स्वाव संकलन गरिने! – PathivaraOnline
Home > समाचार > बाँकेकाे ठोरिया जङ्गलमा भएकाे दुर्घटनाका मृतक तथा घाइतेहरूकाे स्वाव संकलन गरिने!
बाँकेको ठोरिया जंगलमा आइतबार मध्यराती भएको दुर्घटनका १२ मृतकको सनाखत हुन सकेको छैन । घाइते २१ जनामध्ये १० जना सल्यानका, ६ जना दाङका र ५ जना रोल्पाका छन् । उनीहरुको नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका-२ मा भएको दुर्घटनाका घाइते र मृतकको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ दुर्घटनापछि सोमबार बिहान १
बजे नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा ल्याइएको थियो । उनीहरुको बिहान स्वाब संकलन गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.प्रकाशबहादुर थापाले जानकारी दिए । भारतबाट आएको हुनाले सबैको कोरोना परीक्षण गरिएको हो ।
कोरोनाको रिपोर्ट आएपछि मात्र शव व्यवस्थापनबारे टुंगो लाग्ने उनले बताए । घाइतेमध्ये ४ जनाको छाती, टाउको र मुहारमा चोट लागेको, तीनजनाको खुट्टा र हिप फ्याक्चर भएका र ४ जनाको अवस्था भने सामान्य रहेको डा. थापाले जानकारी दिए ।
एक वर्ष अघि मात्र बिवाह भएकि २५ बर्षिया पुजाले श्रीमानको फोन उठाएकै कारण गुमाउनु पर्यो ज्यान!
फ्लाई दुबईको जहाज ठुलो दुर्घटनाबाट जोगियो